Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Allergy အလာဂျီ သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ
၁။ ဆရာရှင့် ကျမအသက်၃၉ နစ်ရှိပါပြီရှင့် ကျမတကိုယ်လုံး အထူးသဖြင်တတောင်ကွေး လက်ဖျံ တင်ပါးပြင်များတွင် ခြင်ကိုက်ဖုကဲ့သို့ အင်ပြင်အဖုအပိက်များ နေ့စဉ်ပေါ်လာပြီး အရမ်းယားယံခြင်းဝေဒနာကို ခံစားနေရပါသည်မှာ တလလောက် ရှိပါပြီရှင့်။ ဗိုက်တွေမနာပါရှင့် အိမ်ထောင်ရှိပြီး ၃နစ်အရအရွယ် ကလေးမိခင်တဦးပါရှင့်။ အိုမီကာ ၃ ဆေး ဆနှူင်းလုံးဆေးမှလွဲ၍ မည်သည့် ဆေးဝါး တားဆေးများ အသုံးစွဲ ခဲ့ပါရှင့် အစားအစာကိုလဲ ပင်လယ်စာများမစားပါဘဲနှင့် ကိုယ်လုံးများတွင် အဖုအပိတ်များ ပေါ်လာချိန်တွင် တနာရီကြာမှ ယားယံပြီး အဖုအပိတ်များကျန်နေ ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ နှစ်ရက်ခြား တခါခံစားရပြီး အခု နေ့စဉ် ရက်ဆက်ခံစားနေရပါသည်ရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ပြန်လည်ဖြေကြားပါ ဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ရှင့်။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဆရာရှင့်။ ဆရာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင့် အာလာဂျီအတွက် ketoconazole 200mg ကို တနေ့တလုံးသောက်ရင် ရပါသလားရှင့်
အာလာဂျီအတွက်စာ ပို့ထားပြီး။ ketoconazole ဆေးက ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုအတွက်ဖြစ်။
ဆရာရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်တော် သောက်ဆေးလေးကို ညွန်ကြားပေးပါရှင့် အားကိုးပါသည် ဆရာရှင့်
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် ကျမ အသက် ၂၄ ပါရှင့် ကျမ ဓာတ်မတည့်သော mistine မှ နှုတ်ခမ်းနီကို ဆိုးမိပါသဖြင့် allergic ဖြစ်နေရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်မဲ့ဆေးကို ဖြေကြားပေးပါဦးရှင်။ နှုတ်ခမ်းတခုတည်းရောင်ယမ်းပြီး အဖုသေးလေးတေဖြစ်နေတာပါ။ mistine နဲ့မတည့်တာ ကြာပါပြီဆရာ။ ခဏခဏဖြစ်လို့ လုံးဝမသုံးပဲရှောင်ထားတာပါ။ အခု သတိမထားမိပဲပြန်ဆိုးမိလို့ ပြန်ဖြစ်ရတာပါရှင့်။
၃။ ဆရာရှင့် သမီးရိုသေစွာ စာရေးလိုက်ပါတယ်။ အသက်က ၂၇ နှစ်ပါ။ သားဦး ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်က (၆) လရှိပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေက အိမ်မှာနေရင်း မျက်နှာကို ရွှေသွင်းတာ လုပ်မိပါတယ်။ cream လေးကိုလိမ်းပြီး ခြောက်ရင် ခွာလိုက်ရတာမျိုးပါ။ နောက်နေ့ မနက်ကျ မျက်နှာတခုပဲ ဆေးထိတဲ့နေရာတွေပဲ နီပြီး ယောင်လာပါတယ်။ အရေးပေါ် ဌာနသွားပြတော့ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်မှ သက်ဆိုင်ရာ OG ဆရာဝန်ကို ဖုန်းနဲ့ treatment ပေးခိုင်းပါတယ်။ အခု Cetrine 10 mg တမျိုးပဲ သောက်ခိုင်းတယ်။ ရေခဲကပ်ခိုင်းပါတယ်။ Calamine lotion B.P နဲ့သနပ်ခါး ပါးပါးလေးလိမ်း ခိုင်းပါတယ် ဆရာ။ ဖြစ်တာ ၂ ရက်ရှိသွားပြီဆရာ။ အရောင်မကျသေးပါ။ Dexa သောက်လို့ရပါ သလားရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့်။
ဗမာလူမျိုးပီပီ ခန့်မှန်းတာကို လွယ်လွယ် လုပ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ထင်တယ်။ ဒါများလား မသိ။ ဘေးကနေ စေတနာတော့ ရှိတာပေါ့။ ဟိုဟာက မတည့်ဘူးအေ့။ ဒီဟာကို မစားနဲ့ကွ။ ဒီလိုနဲ့ ရှောင်လိုက်ရတာများ စားစရာကို မရှိတော့ဘူး။ အသားကြောင့်ထင်လို့ ဗက်ဂျီလုပ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်က ဒါ့ကြောင့်ပေါ့။ အမှန်က မတည့်တာ တမျိုးထည်းသာ ဖြစ်လေ့ရှိတာပါ။ တမျိုးထဲကမှ တမျိုးကမတည့်တာ။ ခေါင်းရှုတ်မသွားနဲ့။ ဟင်းတခွက် ချက်ရင် အမယ်မျိုးစုံ ထည့်ချက်ရတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီထဲက နံနံပင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကြက်သွန်နီ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တာက တခုခုတည်းဖြစ်မှာပါ။
Alimemazine, Chlorphenamine, Clemastine, Cyproheptadine, Hydroxyzine, Promethazine ဆိုတာတွေ ဖြစ်နေရင် သိပ်အကောင်း မဟုတ်သေးဘူး။ အိပ်ချင်တယ်။ အလုပ်လုပ်စရာမရှိအောင် ကံကောင်းသူများ ဆိုရင်တော့ အံကိုက်ဘဲ။ Acrivastine, Cetirizine, Desloratadine Loratadine, Mizolastine တွေကတော့ အိပ်ချင်စေခြင်းမရှိတဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက်မို့ ပိုကောင်းတယ်။
အလှအပသုံး ကော့စ်မက်တတွေကို ရှောင်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။ သဘာဝပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ သနပ်ခါး၊ နံ့သာဖြူ၊ နံ့သာနီ၊ ကရမက်ထက် မက်စရာ မရှိပါ။ အသစ်တွေ ဘယ်လို ဆန်းဆန်း၊ အကောင်းစားလို့ ဘယ်လိုကြွားကြွား၊ သဘာဝ၊ ရိုးရာ၊ ထုံးစံမဟုတ်တာ မှန်သမျှ မေးခွန်းထုတ်ခံနေကြရပါပြီ။
မိဘမျိုးရိုး လိုက်တတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမေ-အဖေကို ရွေးပြီးမှ အမျိုးတော်ကြပေတော့။ ငယ်တုံးက မတည့်ပေမဲ့ လာတော့ ရှောင်စရာ မလိုတော့တာလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ လူများ ဒီနေရာမှာ ကံကောင်းတယ်နော်။ စက်ရုံတွေ ပေါတဲ့နေရာ၊ လူတွေရှုတ်တဲ့ မြို့တွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။ တောသူ-တောင်သားတွေက ဒီတချက်မှာ စားတယ်။ ယောက်ျားလေးများက မိန်းကလေးတွေထက် အဖြစ်များသတဲ့။ အမျိုးသမီးများ ဂုဏ်ယူကြပါလေ။ ဒါပေမဲ့ အလာဂျီ အကြောင်းမေးတာက အမျိုးသမီးတွေချည်း ဖြစ်နေတာမို့ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ သုတေသနလုပ်တဲ့အထဲ ပါသွားကြပုံမရဘူး။ ယားယံတာကိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်ကို ရှာနိုင်-ရှောင်နိုင်ရင် ပျောက်မှာပါ။
2. Allergy medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
3. Allergy - Urticaria - Hives အင်ပြင် ထွက်ခြင်း
4. Allergy and Worm နာတာရှည် (အလာဂျီ) နှင့် သန်ကောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/09/chronic-allergies.html
5. Allergy drug may have potential against Hep C
6. Allergy Medications (အလာဂျီ) ကို ဘယ်လို ကုသမလဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/05/allergy-medications.html
7. Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/04/allergy-relief-kit.html
8. Allergy testing (အလာဂျီ) စစ်ဆေးခြင်း
9. Allergy to Eczema မတည့်တာနဲ့ နှင်းကူနာ
10. Allergy Triggers (အလာဂျီ) ရစေတတ်တဲ့ အကြောင်းတရား (၁ဝ) ပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergy-triggers.html
11. Allergy Relief Kit (အလာဂျီ) ရှေးဦးသူနာပြု ဆေးအိတ်
12. Allergy သို့မဟုတ် မတည့်အတူနေ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/05/allergy.html
13. Asthma and allergy devices not used properly
14. Mango Skin Allergy သရက်သီးခွံ အလာဂျီ